အာဗြဲခြောက်ဘာလချောင်ကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
အာဗြဲခြောက်................ ၂၀ ကျပ်သား
ငရုတ်ကြမ်းမှုန်. ..............၃ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ကြက်သွန်ဖြူ ၊ နီ တွေကိုပါးပါးလှီးပြီးရွှေအိုရောင်ရအောင်ကြော်ပြီးစစ်ယူထားပါ။
ထည့်ကြော်ပြီးစစ်ယူထားပါ ( အလွန်ကြွပ်သွားအောင်ကြော်ရင်တော့စားလို.မကောင်းပါဘူး )
၃ ဇွန်းစာလောက်ချန်ထားပြီး ပိုလျှံတဲ့ဆီတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။
မီးကိုလျှော့ချပြီး..နနွင်းမှုန်.အနည်းငယ်နဲ့အတူ ငရုတ်ကြမ်းမှုန်.တွေကို ဆီသတ်ပါ.။
ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်. အနည်းငယ်တို.နဲ.အရသာဖြည့်စွက်ပြီး..ကြော်ထားတဲ့
ကြက်သွန်နီ ၊ ဖြူ ကြော် ၊ အာဗြဲခြောက်ကြော်တွေထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်ရုံပါ
ပဲ .။ ( ဆားက ငရုတ်သီးအတွက်သာဖြစ်ပြီး..အနည်းငယ်လေးသာထည့်ပေး
( Admin က တစ်လစာ ကြော်ပါတယ် )